Interactive Whiteboard yedzidzo uye bhizinesi
Interactive Whiteboard yedzidzo uye bhizinesi
Chishandiso chiri nyore, chakasimba, chine simba, uye chinotengeka chekudzidzisa.Zvese zvekubata bhodhi mashandiro anogona kuitwa nemunwe kubata kana kufamba pamusoro pebhodhi uye maviri epadivi hotkeys anoita kuti kushanda kuve nyore.
Bhodhi repamusoro rinouya neiyo nano yakavharwa extruded core uye ine nhete furemu kuti iite kushandiswa kukuru kweiyo fungidziro saizi.
Interactive Whiteboard iri kushandisa advanced infrared touching technology ine high touch accuracy.Ultra nhete yealuminium furemu dhizaini ita kuti ive nechitarisiko chakanaka.Inobvumira mushandisi kushandisa chigunwe kana chero opaque kudhirowa nekunyora nemutengo wakaderera, hapana peni yakakosha inodiwa.Nekusvika gumi-mapoinzi ekubata-bata kupindirana, vashandisi vazhinji vanogona kunyora panguva imwe chete.
Zvekushanda nekutamba sechikwata.
Inopindura uye yakasimba yekubata interface.
Software isina mari yerezinesi.
Mapfupi mapfupi ekumhanyisa Yekudyidzana.
Nemahara smart pen tray
Iyo QWB300-Z Series inouya neiyo ichangobva kugadzirwa QPT100 peni tireyi.Iyo ergonomic, iri nyore kubata-palette pamunwe wako, inorongeka zvizere uye ine mamwe mavara esarudzo.
Iyo smart pen tray yaisanganisira 4 ruvara rwepeni: Dema, tsvuku, girinhi uye bhuruu, eraser imwe uye imwe pointer.Yakabatanidzwa kubhodhi chena netambo yakakosha yakapihwa naQomo.
Huya nedzidzo yemahara software-Flow!Inoshanda pro
Iyo software iri nyore kushandisa paunenge uchigadzirira kana kupa zvidzidzo zvezvidzidzo zvakasiyana.Zvine zvitsva zvakawanda
zvinhu uye zviwanikwa zvinoita kuti kudzidzisa chero chidzidzo kuve nyore, kunakidza uye kukurudzira zvakanyanya kuvadzidzi nevadzidzisi.
Kuyerera!Inoshanda pro software ine zviuru zvezvidzidzo zvekudzidzisa.Zvichakadaro, iwe unogona kuwedzera yako sosi semufananidzo/odhiyo/vhidhiyo mune softwared uye chengetedza seyako sosi.
Maturusi akapfuma mupurogiramu yedzidzo uye unogona kugadzirisa bhara rematurusi zvakare.Maturusi aya anobvumira vadzidzisi kupfumisa zvidzidzo zvakajeka zvekudzidzisa.
Software yakavakwa mubrowser
Flow!Works Pro inopa yakavakirwa-mukati web browser.
Zvinhu zviri pawebhusaiti zvinogona kuiswa pabhodhi rekudhirowa kuti zvishandiswe mukuratidzwa.Panguva yekutsvaga webhusaiti, unogona kusarudza chinhu chaunoda (mifananidzo kana zvinyorwa) uye wochikwevera pabhodhi rekudhirowa.Izvi zvinobatsira zvikuru kuti vadzidzi vazive nezvezvidzidzo zviri nyore.
Shandisa segwaro kamera
Flow!Inoshanda Pro inoita kuti ubatanidze kamera yekunze kuratidza mufananidzo wakajeka uye kududzira pamusoro pemufananidzo.
Yakasiyana saizi yekusarudza kwako
Iwe unogona kusarudza saizi 83"/93"/102" inopindirana bhodhi chena ine akasiyana maficha reshiyo kusangana nekwako nharaunda chikumbiro.
Zvinotevera: Chikoro Kudzidza Finger Kubata Interactive Board
Zvakapfuura: QWB300-Z interactive whiteboard
Kuyerera!Inoshanda Pro V2.0 Mushandisi Manual
Intelligent Pen Tray QPT100 Mushandisi Manual
QOMO IR Whiteboard QWB300-Z Rekushandisa Manual
Pazasi mutengo China Mini Chengetedzo Kamera, Covert...
Renewable Dhizaini yeChina Document Imaging Sol...
Zvese mune Imwe Kubata Screen LCD Inoratidza 65 ″ ...
Qomo Election Voting System ine izwi transmis...
IOS Chitupa China Foska Inopisa Kutengesa Hapana Doro...
Kusvika Kutsva China China 65 Inch Smart HD Chikoro...